Ny lanjan'ny toerana dia hevi-dehibe iray manan-danja izay ampianarina amin'ny faran'ny zaza madinika. Rehefa mianatra momba ny isa maromaro ny mpianatra, dia mitohy ny hevitra momba ny lanjan'ny toerana manerana ny sokajy ambany. Ny lanjan'ny toerana dia manondro ny lanjan'ny tarehimarika mifototra amin'ny toerana misy azy ary mety ho sarotra ho an'ny tanora mpianatra hahatakatra izany, fa ny fahatsapana io hevitra io dia ilaina amin'ny fianarana matematika.
Inona no lanjan'ny toerana?
Ny sanda amina toerana dia manondro ny sandan'ny isa tsirairay amin'ny isa.
Ohatra, ny isa 753 dia manana "toerana" telo-na tsanganana-ny tsirairay manana tombony manokana. Amin'io tarehimarika telolahy telo io, ny 3 dia ao amin'ny toerana iray, ny 5 dia ao amin'ny toerana "tsenina", ary ny 7 dia ao amin'ny toerana "an-jatony".
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny 3 dia manondro tarika telo, noho izany dia ny lanjan'ity tarehimarika ity dia telo. Ny 5 dia eo amin'ny toerana malalaka, izay mampiavaka ny soatoavina amin'ny isa 10. Noho izany, ny 5 dia mendrika dimy isa 10, na 5 x 10 , izay mitovy 50. Ny 7 dia ao amin'ny toerana an-jatony, ka izany dia singa fito 100, na 700.
Ny tanora mpianatra dia mifamahofaho amin'io hevitra io satria ny lanjan'ny isa isaky ny isa dia miankina amin'ny sehatra na toerana misy azy. Lisa Shumate, manoratra ho an'ny tranonkala Demme Learning, orinasa mpamokatra fanabeazana, dia manazava:
"Na tsy ao anatin'ny efitrano fisakafoanana ny raim-pianakaviana, na ny efitra fandraisam-bahiny, na ny garazy, dia mbola dadany ihany izy, fa raha ny toerana 3 kosa dia any amin'ny toerana samihafa (toerana zato na an-jatony), dia midika zavatra hafa izany."
Ny 3 ao amin'ny tsanganana dia 3 fotsiny . Fa ny 3 ao amin'ny tsanganana dimampolo kosa dia 3 x 10 , na 30, ary ny 3 ao amin'ny tahantsara an-jatony dia 3 x 100 , na 300. Mba hampianarana ireo lanjany toerana, omeo mpianatra ireo fitaovana Mila mahatakatra io hevitra io izy ireo.
Ny bloque base 10 dia fitaovana manipulative natao hanampiana ireo mpianatra hianatra ny lanjan'ny toerana amin'ny trano fatoriana sy loko amin'ny loko isan-karazany, toy ny kodiarana maitso mavo na maitso (ho an'ny olona), raozy manga (ampolony), ary zaridaina (misy efamira 100-block) .
Diniho, ohatra, maromaro tahaka ny 294. Ampiasao ireo kodiarana maitso ho an'ireo, baoritra manga (izay misy 10 isa tsirairay) mba hisolo tena ny 10 taona, ary trano 100 ho an'ny toerana an-jatony. Asio tarehimarika maitso efatra ahitana ny 4 ao amin'ny tsanganana, sila-bolamena sivy (misy 10 entana tsirairay) mba hanehoana ny 9 ao amin'ny tsanganana ampahany, ary roa ambioka 100 ho an'ny 2 ao anatin'ny tsanganana an-jatony.
Tsy voatery hampiasa blocs 10 ianao. Ohatra, ho an'ny laharana 142 , dia mametraka toerana iray 100 ianao any amin'ny toerana an-jatony, tapa-taratasy 10 eo ho eo ao anaty tsanganana enina, ary roa kilaometatra tokana ao amin'io toerana io.
Mampiasà tabilao toy ny sary eo ambony ity lahatsoratra ity rehefa mampianatra lanjany ny mpianatra. Hazavao amin'izy ireo fa miaraka amin'ity karazana tabilao ity izy ireo dia afaka mamaritra ny soatoavin'ny toerana ho an'ny be dia be.
Ohatra, amin'ny isa toy ny 360.521 : ny 3 dia hapetraka ao amin'ny tsanganana "An-jatony an'arivony" ary manondro 300,000 ( 3 x 100,000) ; ny 6 dia hapetraka ao amin'ny andian-tsanganana "Olom-bitsy an'arivony" ary mampiseho 60,000 ( 6 x 10,000 ); Ny 0 dia hapetraka ao amin'ny tsanganana "An'arivony" ary manondro zero ( 0 x 1000) ; Ny 5 dia hapetraka ao amin'ny tsanganana "Hundreds" ary manondro 500 ( 5 x 100 ); Ny 2 dia hapetraka ao amin'ny tsanganana "Tens" ary manondro 20 ( 2 x 10 ), ary ny iray dia ao amin'ny "Units", na ny tsanganana ary manondro 1 ( 1 x 1 ).
Manaova dika mitovy amin'ilay tabilao. Omeo tarehimarika isan-karazany ny mpianatra hatramin'ny 999.999 ary hametraka azy ireo ny laharana marina ao amin'ny tsanganana mifanandrify aminy. Azonao atao koa ny mampiasa zavatra samihafa, toy ny girigy, kobay, siramamy mifangaro, na taratasy kely kely.
Farito ny lokon'ny loko tsirairay, toy ny maitso ho an'ny olona, ​​mavo ho an'ny tsangambato, mena ho an'ny an-jatony, ary volomparasy ho an'arivony. Manorata isa, toy ny 1.345 , eo amin'ny solaitrabe. Ny mpianatra tsirairay dia tokony hametraka ny isa feno tarehimarika ao amin'ny tsanganana mifanaraka aminy eo amin'ny tabilao misy azy: marika iray maranitra ao amin'ny tsanganana "Tendrombohitra", marika telo mena ao amin'ny tsanganana "Hundreds", tsanganana mavo efatra ao amin'ny tsanganana "Tens", ary dimy marika maitso ao amin'ny tsanganana "Ones".
Rehefa mahatakatra ny lanjan'ny toerana ny ankizy, dia matetika izy no afaka mamandrika tarehimarika amin'ny toerana manokana.
Ny fanalahidy dia ny fahafantarana fa ny isa mitovy dia mitovy amin'ny tarehimarika mihodina. Ny fitsipika ankapobeny dia ny hoe raha dimy na mihoatra ny isa dia miakatra ianao. Raha misy efatra isa na latsaka, dia miodina ianao.
Noho izany, mba hanodidina ny laharana 387 mankany amin'ny toerana farany akaiky indrindra, ohatra, dia hijery ny isa ao amin'ny tsanganana iray, izay ny 7. Hatramin'ny fito dia mihoatra ny dimy, izany dia miakatra hatramin'ny 10. Tsy afaka manana 10 ao amin'io toerana io, noho izany dia handao ny zero eo amin'io toerana io ianao ary hameno ny isa amin'ny toerana folo, 8 , ka hatramin'ny tarehiny manaraka, izay 9 . Ny isa tokony ho 10 no ho 390 . Raha toa ka sahirana mafy ny mpianatra hanaraka izany fomba izany, dia avereno dinihina ny lanjan'ny toerana arak'izay noresahina teo aloha.
Ny famotehana ny fanalana ny trosa tsotra - Business Math
Ahoana ny fikajiana ny lehilahy amin'ny fifandraisana amin'ny vehivavy (sy ny hafa)
Ahoana ny fomba fampiasana ny formula tsotra
Ny fomba hahafantarana sy hanombanana clichés
Star Wars Glossary: ​​Battle of Yavin
Sary Easter Egg Photo Gallery
Fomba fijery konservative momba ny fanavaozana ny fitsaboana
Afaka mianatra pianô amin'ny klôbisy elektrika ve ianao?
Business Meetings amin'ny teny Anglisy
Vehivavy mpiandraikitra tamin'ny taonjato faha-19
Ahoana no hampitomboan'ny kristiana ny Phosphate phosphate?
Ny Vimalakirti Sutra
Famantarana ny feo amin'ny teny anglisy (famaritana sy ohatra)
Inona ny Wingspan amin'ny Basketball?
Neverland Ranch, Trano Legolan'i Michael Jackson